배틀그라운드 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（812.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
▶ကိုရီးယား၏4နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမိုဘိုင်း4ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်4ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာရင်းကို 4U boxs 4U boxs 4U boxs 4U boxs 4U boxs 4U boxs 4U ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ!
▶စစ်မြေပြင် Mobile x angergelion (5/9 ~ 6/19) ကိုစစ်ဆေးပါ စစ်ပွဲ: Eran Gel နှင့် Rivic theme mode သည် anger ဝံဂေလိတရားအကွက်နှင့်ကာကွယ်ရေး။
▶ Classic Mode Update ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ။
အချို့သေနတ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ အသစ်ကဆက်နွယ်သောဘောလုံးကွင်းတွင်ကစားကွင်းတွင်ပါ0င်သည်။
စစ်မြေပြင် (Pubg) မိုဘိုင်းဖုန်း, Game Send Process တွင်သုံးစွဲသူများစွာသည်သေနတ်ကိုင်စစ်မြေပြင်စစ်ပွဲ၏စစ်မြေပြင်စစ်ပွဲများနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသော Royale Mobile Game တွင်ပါ0င်သည်။
စစ်မြေပြင် Mobile Game Royale Battledirefield
Bagg Mobile Battledirefire လက်တွေ့အင်ဂျင်4ကို အခြေခံ. HD ဂရပ်ဖစ်နှင့် 3D အသံနှင့်အတူစစ်မှန်သောစစ်မြေပြင်နှင့် 3D အသံနှင့်အတူ Realthifield ကိုသဘောပေါက်နားလည်သဘောပေါက်လာပြီးကျန်ရှိနေသေးသောလက်နက်များ, တိုက်ပွဲများနှင့်လက်တွေ့သေနတ်သံများမှတစ်ဆင့် Mobae သည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှောက်ခြင်းဆိုင်ရာတိုက်စစ်မှူးအားရွတ်ဆိုခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
▶ Battleground (Pubg) Mobile သည်0ယ်ယူထားသောပစ္စည်းများ0ယ်ယူသောအခါသီးခြားအခကြေးငွေကောက်ခံသည်။
▶စစ်မြေပြင် (Pubg) ) မိုဘိုင်းဂိမ်းအက်ပ်ကိုကိုရီးယားတွင်ပေးသောအကြောင်းအရာများအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
▶စစ်မြေပြင် (Pubg) မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှု -Game screenshot sharing, upload နှင့်သိုလှောင်ခြင်း - ခွင့်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်သည့်အခါ Bagg Mobile Game ကိုပြောခြင်း - ခွင့်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်သောအခါ, optional ကိုအခွင့်အာဏာနှင့်အတူ။
မိဘဂိမ်းချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစီကိုမည်သို့ဆုတ်ခွာရမည်နည်း။ Settings> Parent App> နောက်ထပ် (Settings ချိန်ညှိချက်များ> အက်ပလီကေးရှင်း> အက်ပလီကေးရှင်းများ> apping cornesion များရွေးချယ်ခြင်း> Access tries များကိုရွေးချယ်ခြင်း app by app ဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနည်း: Settings> App> Mo-Game App Selection> Permissions> Version ၏မူကွဲရွေးချယ်မှုများ။ ။
▶စစ်မြေပြင် (Pubg) Mobile Inquiry URL ◀
▶စစ်မြေပြင် (Pubg) မိုဘိုင်း0န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ CAFE.Naver.com/blidgrodoadsmobile/1363325
- ---- developer Contact : 1566-3771
စီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 220-87-45316
2020년 배틀그라운드 모바일 실사판 완성형 (battlegrounds real life) l 티바이러스
skin not give🤧🤧🤧
Ah Thet Myanmar